RW Rooble oo Baydhabo kula kulmay Xildhibaannada,
By Newsroom	 On Nov 24, 2020
Kulankaan ka dhacay Magaalada Baydhabo waxaa soo agaasimay Hogaamiyaha DG Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen, waxaana ka qaybgalay Xildhibaannada labaad ee Dowlad Goboleedkaas, Ganacsato, Dhalinyaro & qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Rooble ayaa la wadaagay warbixin la xiriirta Xaaladda Dalka, Qorshaha Xukuumaddiisa, Doorashada 20/21, Doorka ay ku leeyihiin shaqsiyaadka uu la kulmay & tallaabooyinka siyaasadeed ee la qaadayo.
Ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda laga dhageystay aragtidooda habka loo wajahaya Doorashada Soomaaliya 20/21 si loo dhameystiro muddo xileedka kasoo bilawday 2016/17 laguna sii wado qori isu dhiibka 4-ta sano mar doorasho la qabto.
Raysul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay habeenkiisii labaad ku hoyday Magaalada Baydhabo, waxa uu bartanka uga jiraa kulamo looga hadlaya doorashada Soomaaliya oo marin ay ka keeneen Musharixiinta Hogaamiyaha.
DG Koofur Galbeed ayaa kamid ah maamulada hoostaga DFS ee soo gudbiyay Xubnaha Guddiyada Farsamada, Xalinta Khilaafaadka & doorashooyinka si ay u bilaabato howsha doorashada 20/21 oo ay heshiis siyaasadeed loo gudbiyay Baarlamaanka ka gaareen Hogaamiyayaasha Heer Federaal & heer Dowlad Goboleed.
Mareykanka oo ku baaqay in wada-xaajood siyaasadeed laga
Salaam Somali Financial institution contributes to Somalia’s financial progress